[YEMAHARA] Maitiro Ekuisa Android 12 Toggle, Zvinyorwa UI Kadhi uye Zvimiro - WebSetNet
[YEMAHARA] Maitiro Ekuisa Android 12 Toggle, Zvinyorwa UI Kadhi uye Zvimiro
Google vachangobva kuzivisa yavo yazvino vhezheni ye Android, inonzi Android 12 iri parizvino iri pasi pe beta uye inowanikwa pa mashoma mafoni akasarudzwa kubva kuGoogle, Asus, Oneplus, Oppo, Xiaomi, Realme, Vivo, TCL, ZTE, Tecno, uye Sharp. Iyi itsva vhezheni yeAndroid inounza shanduko izere muUI inonzi "Zvinhu Iwe" nezvitsva maficha, zvirinani kudzora zvakavanzika, nezvimwe. Asi chakanyanya kubata maziso emunhu wese mawadhiji matsva, sezvo achiuya aine dhizaini nyowani, yakashambidzika uye yakachena, ichipa kutaridzika kunofadza kuchidzitiro chemumba chefoni yako. Nhasi ndichave ndichigovana nzira yekuwana iwo anoshamisa-anotaridzika Android 12 majeti izvozvi, izvo zvakare zveZVEMAHARA zvachose, pafoni yako. Saka ngatitangei.
Zvakare, Verenga | Android 12 Chekutanga Kutarisa: 8 Yakanakisa Zvimiro Kuuya kuneako Smartphones
Kuti uwane maawidhi gumi nemaviri efoni pafoni yako, zvese zvaunoda zvinongova maapplication maviri, imwe yacho ndeyewijeti yekugadzira (KWGT), uye paki yeiyo Android 12 themed widgets marongero (Zvinyorwa zveKomputa), unogona kudhawunirodha kubva chinongedzo pazasi.
KWGT Widget Muiti (YEMAHARA)
Zvinyorwa Zvinyorwa (ZVEMAHARA)
Zvakare, Verenga | Wepamusoro 10 Matipi eApple 12, Matipi, uye Akavanzika Zvimiro
Tungamira kuti utore Android 12 Widgets pane yako Runhare
Izvozvi zvatave kudhawunirodha ese ari maapplication, ngatitangei kushanda nekugadzira edu edu maWidgets. Usatombo kunetseka zviri nyore kwazvo, uye ndiri pano kuti ndikutungamire munzira iyi.
Vhura iyo KWGT app, uye bvumidza mvumo yeNzvimbo uye Kuchengetedza.
Nguva refu pfuurira pachiratidziro chemusha uye tinya pamajeti kuti uwedzere imwe.
Bhura pasi pasi kuKustom Widget, uye tora uye ubatisise chero yeiyo KWGT Widget kusvikira yaonekwa pachiratidziro chekumba.
Iye zvino, pfuurira kwenguva refu kuti ushandure hwindo rewidget sezvaunoda.
Imwe chete pombi pahwindo rewijeti kuti ugadzire widget.
Paunenge iwe uri muKWGT app, iwe uchaona akaiswa mapakeji, seizvi.
Dzvanya paMidziyo Komponents (iyo yatakaisa kubva kuchitoro chekutamba)
Pano iwe uchaona mashoma majeti sarudzo senge Chinyorwa Toggles, Makadhi, Mapurogiramu, uye Widgets, unogona kusarudza iyo yaunoda kuwedzera. Semuenzaniso, ndiri Zvinhu zvekushandisa.
Paunongonhonga widget inozozvigadziridza pachayo kuti ikwane iyo widget nzvimbo. Kana chimwe chikamu chikatemwa padyo nemakona, ipapo tinogona kuchigadzirisa nekudzvanya paGlobals tebhu, uye kugadzirisa iyo DPI nekukanda pane iyo Plus (+) / Yekutungamira museve Kuderedza saizi, uye Minus (-) / Kudzokera kumashure museve ku wedzera saizi.
Mushure mekugadzirisa saizi, tinofanirwa kuigadzirisa nezvatinoda, uye kuti tidaro, tinofanirwa kudzokera kuzvinhu tebhu, tinya paStack Group.
Zvino stack imwe neimwe inoratidza mutsara wezvinhu, sezvo stack 1 iri yezvinhu zviviri zvemutsara 1, stack 2 ndeyezvinhu zviviri zvemutsara 2, nezvimwe.
Ngatigadzirisei wechipiri mutsara uye tishandure chinhu chimwe kuve Instagram:
Dzvanya paStack Boka 2
Tinya pane yekutanga chinhu kadhi kuti ushandise yekutanga element (Disord), uye yechipiri chinhu kadhi kugadzirisa echipiri element (Protonmail).
Dzvanya paRebhi kuti ugadzire iwo mavara, wobva wadzvanya paTambo, bvisa Discord uye uchichinje ku Instagram. Dzvanya paDone.
Zvino, tinya pane ino folda icon kuti udzokere.
Dzvanya paChiratidzo kugadzirisa iyo icon, wobva wadzvanya paFontIcon, uye bvisa Discord uye uchichinje ku Instagram. Dzvanya paDone, izvi zvinoshandura iyo icon otomatiki (mamwe maekisheni anowedzerwa kazhinji muapp nemitsva mitsva).
Tinogona zvakare kushandura iyo color, icon saizi yeiyo icon, kubva pano.
Izvozvi zvatave nekukwirisa chitarisiko, ngatichiisei kuti titange Instagram izvozvi.
Enda ku Kubata Tab, uye tinya pane imwechete. Chinja iyo app kubva Discord kuenda Instagram.
Saizvozvo, isu tinogona kushandura zvimwe zvinhu kune zvatinoda.
Paunenge wapedza, tinya pane floppy diski kuchengetedza shanduko.
Iye zvino iyo yakazara inoshanda widget ichaonekwa pachiratidziro chekumba.
Iye zvino, iwe unogona kuwedzera mamwe majeti senge mamiriro ekunze, mimhanzi, mapikicha, nhanho kiyi, nezvimwe, kuitira kuti udaro, pane imwe yakapusa shanduko mukuita.
Tinya pane new widget hwindo
Tinya pane yekuwedzera icon
Enda kuKomponent, uye sarudza iyo widget yesarudzo yako.
Saka aya ndiwo maitiro aunowana iwo Android 12 majeti pane yako Android nhare, izvozvi kune zvachose MAHARA !! Kuti uwedzere chekupedzisira kubata-kumusoro kune ino Android 12 kutarisa, isu tinongoda kushandisa iyo Android 12 Wallpaper. Unogona kutarisa chinyorwa chedu kuti utore iyo Android 12 dhizaini Wallpaper uye Clock widget pane yako foni. Chinhu chakanakisa ndechekuti yakafanana neiyo Android 12 inoenderana kuti ienzane nemuvara wemajeti pamwe neyeyeye Wallpaper.
Kune mamwe akabhadharwa KWGT maapplication uye mapakeji ane basa nenzira imwechete asi achipa zvimwe maficha nemajeti. Zvimwe zvacho ndizvo Android 12 Widgets, Widgets yeKWGT Pro, Zvishandiso U. Ndeipi Android 12 widget yaunofarira, uye unofara zvakadii neApple 12? Tiudzei mumashoko ari pasi apa. Ramba Wakagadzirira kune mamwe akadaro Android Matipi.